Daawo:Qaban-qaabada soo dhawaynta Ra’iisul Wasaare Khayre oo Kismaayo si Xoog leh uga Socota. – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-54096 single-format-standard">
Daawo:Kulan lagu taagerayo Madaxwaynihii hore Jubbaland Axmed Madoobe ayaa Kismaayo ka dhacay
Musharax Xidig oo Sheegay cida Soo Abuubashay Qarax lagu dili Rabay
Daawo:Maxkamadda Ciidamada oo Xukun dil ah ku riday Dable Boliis Cali Maxamuud Axmed oo horay ugu dilay Cabdirisaaq Yuusuf Guure
Daawo:Barakacayaasha beledwayne oo ka mudahaaraday musuqmaasuq lagu sameeyey Gargaarkoodii
Bisha Ramadaan iyo Kafaa’idaysigeeda Shiiq Mustafa
Home / Wararka Maanta / Daawo:Qaban-qaabada soo dhawaynta Ra’iisul Wasaare Khayre oo Kismaayo si Xoog leh uga Socota.
Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee dawlad gobaleedka Jubaland ayaa waxaa ka socota qaban-qaabadii ugu dambaysay ee lagu soo dhawaynayo Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre iyo wafdi uu hogaaminayo oo dhawaan ku wajahan.
Boorar waawayn oo lagu daabacay sawirrada Ra’iisul Wasaaraha iyo madaxwaynaha dawlad gobaleedka Jubaland, lagu muujinayo soo dhawaynta heerkeedu sarreeyo ee Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu arkayaa qaybaha ay ka koobantahay magaala xeebeedka Kismaayo.
Qaar kamid bulshada magaalada oo ka hadlay Qaban-qaabada loogu diyaar garoobayo socdaalka Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin in uu soo noqdo ra’iisul wasaaraha qaranku, iyaga oo sheegay in socdaalku muujinayo sida dawladda federaalka iyo dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah ay uga go’antahay ilaalinta midnimada, wadajirka horumarinta iyo soo celinta karaamada umadda Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa la filayaa marka uu gaaro Kismaayo in uu la kulmo madaxwaynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, ayna ka wada hadlaan arrima badan oo ay kamid tahay adkaynta amniga, gaar ahaan sida kooxaha argagaxisada ah looga sifayn lahaa deegaannada ay dalka uga suganyihin.
← Previous Story Madaxweynaha Uganda oo ku hanjabay in Ciidankiisa kala baxayo Soomaaliya
Next Story → Xildhibaan farax Xasan ayaa Ra’iisalwasaare Khayre kaga digay aaditaanka Kismaayo